2018 trending chigadzirwa inopisa Sale motokari Obd refu bhatiri upenyu vezvirwere Tracker kuti motokari pamwe chirwere mashandiro kwenguva chaiyo nguva Anti-kuba fekitari uye bhizimisi | Roadragon
2018 trending chigadzirwa inopisa Sale motokari Obd refu bhatiri upenyu vezvirwere Tracker kuti motokari pamwe chirwere mashandiro nguva chaiyo Anti-kuba
2018 trending chigadzirwa inopisa Sale motokari Obd refu bhatiri upenyu vezvirwere Tracker kuti motokari pamwe chirwere mashandiro kwenguva chaiyo nguva Anti-kuba The G-M220 akatevedzana chinhu motokari akangwara Obd inouraya kuti sezvarayirwa pamwe OBDII / EOBD mureza. Integrated 2G samambure kukurukura module, mukuru-zvakarurama GPS module kana Beidou / GPS hunyambiri-rudzi module, mukuru-kuita-akabatana matatu giravhiti Switch uye motokari ECU kombiyuta kutaurirana module. Kunoenderana 9-36V paupamhi voltage yokutevedzera, rinogona Upload motokari kumhanya ...
Supply Mano: 30000 Pieces per Month
The G-M220 akatevedzana chinhu motokari akangwara Obd inouraya kuti sezvarayirwa pamwe OBDII / EOBD mureza.
Integrated 2G samambure kukurukura module, mukuru-zvakarurama GPS module kana Beidou / GPS hunyambiri-rudzi module, mukuru-kuita-akabatana matatu giravhiti Switch uye motokari ECU kombiyuta kutaurirana module. Kunoenderana 9-36V paupamhi voltage yokutevedzera, rinogona Upload motokari achimhanya chinzvimbo, motokari ezvinhu Data uye mutyairi kudzora Data kuti motokari Network utariri chikuva kuburikidza Network module kuziva Positioning njanji mubvunzo, motokari Data zvichiongororwa, motokari kuongorora mumuviri uye kutyaira nhamba maitiro.
Feature chinhu D escription
2G samambure Tinotsigira Quad-bhendi 2G Network. Modules mune dzimwe nyika zvinogona kutsiviwa runoenzanirana maitikiro zvisungo kuchinja omunharaunda network, inowirirana Mobile makadhi parunhare uye IoT makadhi.
Positioning Support GPS / Beidou Dual muoti
Obd date Tinotsigira dzakati mashoko akadai OBDII / EOBD
Driving maitiro Maererano motokari Data uye chinzvimbo, izvozvo anoongororwa kana mutyairi ane akaipa dzokutyaira maitiro akadai nokukurumidza kumhanyisa, kungoerekana deceleration, unopinza dzokai, etc. panguva rwendo.
pfuma D escription
The aramu kuti kudhonza kubuda Anogona kuiswa pamwe bhatiri kutsigira aramu mashandiro kudhonza kubuda
kugadzwa Mirayiridzo :
1 Kuwana motokari Obd chirwere chigaro, anoreva zvakafanana inowanikwa nzvimbo;
2 Zarurai divi kanyika ari mudziyo uye dzinoisa mashoko Micro-SIM kadhi (3FF svikiro kadhi) maererano achitungamirirwa chitaridzi;
3 Connect kuti chirwere zvakananga Obd chirwere inowanikwa iri motokari kuti simba iri. The chakarurama chiedza iri uye kuchengeta kana chinoratidza blinks dzinowanzoona. Kusvikira mudziyo uri paIndaneti uye akaiswa anowanzoita, nguva yokutanga paIndaneti uye Positioning achava zvishoma refu.
4 Kana motokari iri atanga, mudziyo vachangoerekana kutaura motokari kuwana Data payo rinotsigira;
5 Equipment pamwe bhatiri rinowanzoshandiswa yakarumbidza kutanga injini kuti kupikisa bhatiri kuti anopfuura 2 maawa, kuitira kuti aramu uye mamwe mashoko anobudiswa.
Cherechedza: Parameters zvakadai pakashama vari pre-kuisa sezvinodiwa asati abva fekitari.
Previous: Hot Mini Chinyorwa Obd II vezvirwere Tracker pamwe maikorofoni uye vezvirwere Tracker programmable kuti motokari motokari uye rori
Next: Rakarurama akangwara refu bhatiri upenyu hwose motokari 2g Mini Obd vezvirwere Tracker